News - Suzhou Lumlux | 2018 Guangzhou International Lighting Exhibition အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်လိုက်ပြီ။
အပင်၏ထပ်ဆောင်းအလင်းရောင်ကို ၁၅ နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ပါ
Suzhou Lumlux | 2018 Guangzhou International Lighting Exhibition အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
လေးရက်ကြာ ၂၀၁၈ ကွမ်ကျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလင်းရောင်ပြပွဲသည်ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်စည်ကားနေသောကွမ်ကျိုးမြို့တော်ရှိပူပြင်းသည့်နွေရာသီတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းပြီးနောက်ရာသီဥတုပူပြင်းနေသော်လည်းပြပွဲအပေါ်လူထု၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သော်လည်းလေးရက်အတွင်း Lumlux ၏ Booth သည် visitors ည့်သည်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ပြပွဲတွင် Suzhou Lumlux သည်စွမ်းအင်မောင်းနှင်မှု + အသိဥာဏ်ရှိသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏စီးရီးအသစ်များကိုကောင်းစွာစီစဉ်ထားပြီးထုတ်ကုန် ၇ စီးနှင့်လျှောက်လွှာပုံစံ ၆ ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြား visitors ည့်သည်များအလွန်စိတ်ဝင်စားမှုပြသည်။
အထူးသဖြင့်လမ်းမီး / ဥမင်အလင်း၊ သတ္တုတွင်းအလင်းနှင့်စက်ရုံအလင်းတို့အတွက်အသိဉာဏ်ရှိသောပါဝါထုတ်ကုန်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် visitors ည့်သည်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ 600W ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော LED high-power supply သည်အခြားထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ပြပွဲကျင်းပတဲ့နေရာအပြင်ဘက်မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ပြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေမန်ဂျာမစ္စတာပူးသည်ထုတ်ကုန်ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အကြောင်းအရာအလိုက်အစီရင်ခံစာများနှင့်မီဒီယာအင်တာဗျူးများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
လေးရက်ကြာပြုလုပ်သောပြပွဲသည် Lumlux ကို visitors ည့်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များသာမကသာမကစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏ရှေ့မှောက်တွင်လည်းလမ်းညွှန်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
နာကျင်မှုမရှိအကျိုးအမြတ်မရှိပါ။ Lumlux သည် Guangzhou International Lighting Exhibition တွင်အောင်မြင်စွာရောက်ရှိခြင်းသည် Lumlux အဖွဲ့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ပြပွဲမတိုင်မီ၊ ပြသခြင်းနှင့်အပြီးတွင်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ reception ည့်ခံခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ နေရာအနှံ့တွင်အဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်သည်။ Lumlux အမှတ်တံဆိပ်သည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိအလုပ်များဖြင့်သာလွန်ထူးကဲသောအရာများအထိရှေ့သို့တက်လှမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်! ! !
၂၀၁၈ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလင်းရောင်ပြပွဲသည်ကုန်စည်ပြပွဲသို့တက်ရောက်မှုပြီးဆုံးသော်လည်း Suzhou Lumlux သည်အိမ်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များထံမှအထူးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Lumlux တံဆိပ်သည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ပိုမိုအားကောင်းလာမည်။ ကွမ်ကျိုးရှိ 2019 International Lighting Exhibition တွင်နောက်ထပ်တွေ့ဆုံကြပါစို့။
post အချိန်: ဇွန် -12-2018
LUMLUX CORP ။
အပြည့်အဝ Spectrum Led Lights, အဖြူရောင်အလင်းကြီးထွားလာသည်, ပတ်ပတ်လည် Led ကြီးထွားလာ Lights, စမတ် Led အလင်းလ်တာ,